Faah Faahin: Warar kala duwan oo ka soo baxaya Qarax Ismiidaamin ah oo goordhaw ka dhacay …. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Faah Faahin: Warar kala duwan oo ka soo baxaya Qarax Ismiidaamin ah oo goordhaw ka dhacay ….
by admin 1st March 2018 059
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo uu waday qof ismiidaamiye ah ayaa waxaa uu ku qarxay bar koontarool oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka siinka dheer ee duleedka muqdisho.
Gaariga ayaa qarxay iyadoo ciidamada ammaanka ay baaris ku wadaan waxaana wararka qaar ay sheegayan in qaraxa ay ku dhinteen seddex ruux.
Alshabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda qaraxa ismiidaaminta ah waxaana ay sheegeen in qaraxa ay la beegsadeen koontarool ciidamada Nabad sugidda ay ku lahaayeen deegaanka siinka dheer ee duleedka muqdisho.
Safaaradda Talyaaniga ee Soomalia oo Qalab Caafimaad iyo Daawooyin ku wareejisay Taliska Xoogga Dalka
SAWIRRO: Bashiir Jaamac Goobe oo ku sugan Doha ayaa waxa uu Booqday Xabsiga ugu weyn Dalka Qadar
War hada: Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo ka yimid gobolada dhexe ayaa gacanta lagu dhigay+xagee lagu qabtay inteesa u socday??
Tifaftiraha K24 11th February 2017
Daawo: Alshabaab oo soo bandhigtay qaabka oo u dhacay weerarkii lagu dilay askariga mareykanka ee ka dhacay sh.hoose
Tifaftiraha K24 6th May 2017
Faah Faahin : Ciidamada Ilaalada Madaxtooyada oo la wareegay Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir